Nduzi kachasị na Methyltestosterone maka Bodybuilding
Ị na-achụ nta maka steroid siri ike nke meriri ntụkwasị obi nke ndị dọkịta? Ọfọn, methyltestosterone kwesịrị ịbụ nhọrọ ọzọ gị. Chọpụta uru ndị ị na-eji ọgwụ ọjọọ a, akụkọ ntolite ya na usoro ahụike, mmetụta ahụ, na otu esi zụta ọgwụ ahụ.
Ọ bụghị ihe gbasara ịbanye n'ụlọnga gọọmenti na-arụ ọrụ mgbatị. Ikwesiri ime ihe karịrị ịrụ ọrụ. A sị ka e kwuwe, ị nwere ike ịda mbà n'obi na mkpali na-aga n'okporo ụzọ, karịsịa ma ọ bụrụ na ọ bụ ihe a na-apụghị ịghọta.
Onye ọ bụla na-ahụ anya na-atụ anya ọdịdị anụ ahụ na-akọwa ọdịdị ahụ ike. Ọ bụrụ na ị na-aga asọmpi, ike gị, ike gị, na ume gị gụọ. Na ezi uche, ihe ndị a bụ nanị ntọala nke ihe ịga nke ọma gị. Trenbolone Enanthate na Trenbolone Acetate (Kedu onye na-enweta mmeri?)
Ndi afo ama osụhọ ke akpanikọ? Jide n'ihi na e nwere ọtụtụ ihe echere maka gị. Ọ bụ ezie na anyị nwere ihe mgbaru ọsọ dị iche iche, anyị nile chọrọ ka ike ahụ dị egwu nagide onye iro anyị. N'okwu a, ọ dịghị mgbe ọ na-afụ ụfụ ịnwale steroid dị ka methyltestosterone. Maka uru nke ime ihe ike nke onye ọrụ ahụ, ọgwụ a karịrị ndị niile na-asọmpi ya.
Tupu iwere methyltestosterone, jide n'aka na ị ghọtara isiokwu a.
1.Kedu ihe bụ Methyltestosterone? Kedu ka o si arụ Ọrụ?
Methyltestosterone bụ otu n'ime obere ụlọ akwụkwọ ochie nke na-emepụta ihe ndị na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe. Ọ bụ ụlọ ọrụ chemical nke CAS adịghị 58-18-4. Ngwaahịa a bụ ọgwụ ọjọọ maka bodybuilders ka ọ na-egosipụta àgwà androgenic na anabolic.
Methyltestosterone bụ onye ọsụ ụzọ na-anụ ọnụ, nke na-enweta site na testosterone. Ihe na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ dị iche bụ itinye nchịkọta C17-alpha alkylated. Nkà mmụta sayensị, mgbakwunye nke ìgwè methyl na-eme ka o doo anya na ọgwụ ahụ nwere ike ịdị ndụ site na nkwụsị ọrụ na mgbaze mgbaze na ahụ.
Na Methyltestosterone ìgwè methyl na-etinye aka na 17th ọnọdụ nke carbon atom. Akụkụ a na-eme ka ụlọ ọrụ ahụ daa na klas C-17 alpha-alkylated steroid. Otú ọ dị, maka Methyltestosterone bodybuilding, ihe anabolic anaghị adị ka ọ dị ka ọ dị na oghere C-17-ac.
Onrogenic na anabolic Frog bụ ihe dịka 100 maka ụdị ọ bụla. Nke a 1: 1 ruru na nke testosterone.
Ọ bụ ezie na testosterone nke mbụ a na-ahapụ onye ọ bụla na-arụ ọrụ na-enwe nnukwu uru na arụ ọrụ dị mma, ọ na-eji ya eme ihe. Dịka ọmụmaatụ, Methyltestosterone ọgwụ na-edozi ahụ nwere ọgwụgwọ na-agwọ ọrịa kansa, ọgwụgwọ menopausal, na nlekọta nke osteoporosis.
Methyltestosterone dị na 1935. The steroid adawara ọhụrụ maka iji oral androgens ọ bụghị naanị na ngwa ngwa kamakwa na bodybuilding ngalaba. Isi ihe kpatara ịmalite ọgwụ iji gbanwee testosterone dị na ụmụ nwoke mgbe ogo dị elu dị ka ọ dị na mbụ.
Ọ bụ ezie na Methyltestosterone maka ire ere dị dịka onye na-agwọ ọrịa steroid, nke Ciba Pharmaceuticals gbagotere mbadamba mbadamba nke ga-esi na ire ya kwatuo. Ọgwụ ndị a nile bụ ọnụma n'etiti 1950s na 1990s nke nwere aha aha, Metandren Linguets.
Kama ịṅụ mpi Methyltestosterone, i nwere ike itinye mbadamba mbadamba Metandren Linguets n'okpuru ire ma kwe ka ha kwatuo. N'ịbụ onye na-etinye uche, steroid na-agagharị site na mucosal membranes na-enweghị na-agafe imeju.
Dịka onye ọ bụla ọzọ na-agwọ ọrịa anabolic, iji ọgwụ a anọgide na-arụrịta ụka. N'ihe dịka ọ nwere akụkọ ihe dị ọcha, ọtụtụ mba amachibidoro ma debe ya Methyltestosterone soplaya site n'ahịa ahịa ọgwụ. Were, dịka ọmụmaatụ, na njedebe 80s; German Endocrine Society mere ka a kwụsịkwa ịzụ ahịa Methyltestosterone site na German pharmacies.
N'ikpeazụ, ihe ka ọtụtụ ná ndị Europe na-agbaso ya ma machibido ya n'ihi ụbụrụ Methyltestosterone pụrụ inwe dịka hepatotoxicity. N'ime mba ndị America, ọgwụ ahụ nwere ike ịnweta maka ọgwụgwọ na ọgwụgwọ. Otú ọ dị, ọ na-esiri ike ịchọta ya dịka nhazi nke otu ebe ebe ọ bụ na methyltestosterone emepụta ga-ejikọta ya na ihe ndị ọzọ.
Na United States, ọgwụ ahụ bụ iwu naanị n'okpuru ndenye aha ziri ezi. Ndị isi egwuregwu na-eme egwuregwu gụnyere ndị Kọmitii Olimpik Mba Nile emebiwo iji methyltestosterone eme ihe n'egwuregwu. Ọ bụ Nhazi oge III na nke IV na United States na Canada, n'otu n'otu.
Otú Methyltestosterone si arụ ọrụ
N'ịbụ onye na-arịa ọrịa mkpụrụ akụkụ alkylated, Methyltestosterone na-ejikọta ndị nabatara androgen (AR). Ọ na-eme dị ka mkpụrụ maka nzere 5a-reductase, ya mere, gbanwee n'ime 17a-methyl-dihydrotestosterone (mestanolone). Mgbe ejidere mkpụrụ ndụ AR, steroid na-ebute nsụgharị nke mkpụrụ ndụ nke etrogen, bụ ndị na-ebu oke ibu na njirimara nke abụọ.
N'adịghị ka mgbatị ndị ọzọ nke testosterone, nchọpụta methyl nwere njirimara dị ala nke ọrụ anabolic. Ya mere, usoro anabolic na androgenic ratio dị ntakịrị, na-eme ka steroid nwee ihe ndị dị elu na-eme ka etrogenic.
Ihe dị egwu nke methyltestosterone steroid steroid bụ nke na ọ na-eme ka ọ dị mma n'oge usoro ọrụ n'ime ahụ. Ngwurugwu ahụ n'ime ihe ndị na-akpata 17a-methyl estradiol nwere ike ịbụ estrogenicity na ụbụrụ estrogenic na-esote dị ka njigide mmiri na gynecomastia.
Product aha Methyltestosterone
Aha aha 17a-methylandrost-4-en-17β-ol-3-otu
CAS ọ dịghị. 58-18-4
Ebe na-agbaze (Celsius C) 161 - 166
Atụmatụ a na-esi esi (Celsius C) 383
nchekwa okpomọkụ Echekwala na ụlọ okpomọkụ (2 Celsius C - 20 Celsius C), pụọ na okpomọkụ, mmiri, ma ọ bụ ìhè
ọdịdị Ihe na-acha ọcha na-acha ọcha creamstalline ntụ ntụ
molekụla ibu 302.46 g / mol
molekụla usoro C20H30O2
Solubility Mmiri mmiri bụ 34 g / mol na 25 ° C
· Mmanya mmanya nke Methyl
· Na-esi ísì ụtọ na mmanụ mmanụ
Ọgwụ ọjọọ Anabolic-androgenic steroid
ojiji Ime ka ahụ dị ike ma mee ka ike gwụ
Anabolic rating 115 - 150
Androgenic rating 95 - 130
Aha aha ahia Gbasara ya
A gam akporo 25
A gam akporo 10
Ụzọ nke Methyltestosterone nchịkwa
Enwere ụzọ atọ iji nye methyltestosterone ọrụ. Ebe ọ bụ na ọ dị na mbadamba ụrọ, usoro ahụ bụ usoro okwu. Ị nwere ike ilo ma ọ bụ tinye ya n'okpuru ire ma ọ bụ n'agbata agba na ezé maka nchịkwa ala na ịchọrọ, n'otu n'otu. N'ọnọdụ a, ọgwụ ahụ ga-agbari kpamkpam n'enweghị eriri afọ.
Were steroid otu ugboro n'ụbọchị maka izu atọ n'otu oge nke oge. Kwesịrị ka ọ bụrụ na ị na-enye ya na afo efu iji mee ka bioavailability nwekwuo. Inyocha methyl na nri ga-eme ka ọ gbasaa na abụba ndị a na-adịghị edozi, ya mere, belata ntinye ya na ọbara.
The Methyltestosterone usoro onunu ogwu na-adabere n'ọtụtụ ihe. Dịka ọmụmaatụ, ụmụ nwoke ga-enwe ọganihu kachasị elu na dosing karịa ụmụ nwanyị. Ọzọkwa, ụzọ nke nchịkwa ga-ekpebi ego steroid a bodybuilder ga-ewere. Ọ bụrụ na ịchọrọ mbadamba mbadamba, dose ahụ ga-abụ ala n'ihi oke ike.
Maka ebumnuche nke ịme ahụ, jiri usoro 10mg na 50 mg mee ihe kwa ụbọchị maka izu kachasị nke 8 izu. Otú ọ dị, ndị na-arịa ọrịa androgen deficiency nwere ike iji ọgwụ ahụ mee ihe ọ bụrụhaala na mmetụta ndị dị ntakịrị dị ntakịrị. Ihe niile I Kwesịrị Ịma Banyere Anavar (Oxandrolone) maka Bodybuilding
Ọ bụrụ na ihe mgbaru ọsọ gị bụ ịkwalite arụmọrụ, mgbe ahụ methyltestosterone abụghị maka gị. Ka m kọwaa ya. O nwere mmetụta dị elu na androgenic, nke nwere ike ọ gaghị emegọrị ya nke ọma na mmụba nke hormonal. Ya mere, ọ bụghị ihe ize ndụ na-emetụta nsogbu ndị na-adịghị na-emetụta ndị na-alụ ọhụrụ.
Ọ dị mma na ụmụ nwanyị na-eji steroid naanị n'okpuru ndenye ọgwụ dọkịta. N'ọtụtụ ọnọdụ, doses dị ka 3mg ga-ejikwa mgbaàmà nke menopause. Otú ọ dị, kwa ụbọchị methyltestosterone usoro onunu ogwu nwere ike ịga na 200mg mgbe ị na-agwọ ọrịa carcinomas.
Tupu ịre nyocha methyl, jide n'aka na ị gụọ site na labeling prescription. Ihe omuma a ga - enye gi aka itinye uzo esi eji ọgwụ eme ihe, nchedo nchedo iwere, na ihe icho anya mgbe gi na onu ogugu.
Ihe ọzọ dị oke mkpa ịchọrọ bụ na ị kwesịrị ijide n'aka na ị na-enye methyltestosterone n'oge ọ bụla. O b ur u na i na-at ufu ihe a na-eme kwa ub och i, wep uta ya ozugbo ob ula echiche ah u mebiri gi. Ọ bụrụ na ọ bụ oge gara aga, mee ka onye ahụ furu efu daa ma nọgide na ndenye ọgwụ gị.
Ọgwụ a dị irè maka ma ndị nwoke ma ndị nwanyị. Otú ọ dị, ndị nwanyị kwesịrị iji ụbụrụ ala kachasị dị ka o kwere mee.
Methyltestosterone Mmekọrịta Mmekọahụ
Nlereanya Methyl nwere ike iji ọgwụ ọjọọ eme ihe, ihe mgbakwunye nri, ọgwụ ọgwụ, na ọgwụ ndị ọzọ na-abụghị ọgwụ. Ndepụta a gụnyere ndepụta ọgwụ ndị na-arịa ọrịa shuga, ndị dị ka ọbarafarin, na oxyphenbutazone.
Ndị nne na-azụ nwa na ndị nọọsụ agaghị ewere methyltestosterone. Ọbụna ọ bụrụ na ị dị ime mgbe ị na-aṅụ ọgwụ ahụ, i kwesịrị ịtụle ịkwụsị ọgwụ ahụ. Nnyocha ndị e mere na oke rata na-akwado na steroid na-akpata nkwarụ nkwarụ, mmepụta nwa ebu n'afọ, na nsogbu ndị ọzọ nwa ebu n'afọ.
Maka ụmụaka na ndị nọ n'afọ iri na ụma, iji ọgwụ methyl eme ihe nwere ike igbochi ọkpụkpụ ọkpụkpụ.
Ndị ọzọ dị iche iche nke kwesịrị ichota ndị steroid bụ ndị ọrịa cancer, ndị nwere obi obi, na ndị nwere ọrịa ọbara. Ọ bụ ezie na ọ nwere akụkọ ihe mere eme banyere ịhazi na ịgwọ ọrịa cancer ara, ọ dị mma ịnwe ndenye ọgwụ.
Ọfọn, ọ bụrụ na ị bụ onye na-eme egwuregwu, onye steroid nwere ike ịbụ naanị nhọrọ maka ịkwalite arụmọrụ gị na ịbawanye ume gị. Otú ọ dị, ị kwesịrị ile anya ebe ọ bụ na ndị na-eme egwuregwu ga-achọ gị. O doro anya na ị ga-agbagha ihe ndekọ ụwa, ma ndị ọchịchị ga-ewepu nkwụ gị ma gbochie gị itinye aka n'egwuregwu.
Methyltestosterone na-adịkarị n'etiti izu isii na asatọ. Ngwá ọrụ ezigbo ọnụ bụ 40 - 50mg. Otú ọ dị, nke a apụtaghị na uru ọ bụla dị n'okpuru ebe a ka ga-esi na ya pụta. N'ụzọ megidere nke ahụ, ị ​​ga-achọpụta mmelite ole na ole na mmetụta dị oke ntakịrị.
Ọ bụrụ na ị ga-eji ụdị buccal, jide n'aka na ị belata usoro ọgwụ ahụ ruo 50%. Ị ga-egbutu na dose n'ihi na usoro nchịkwa a nwere ihe dị elu bioavailability tụnyere ụdị okwu.
Na njedebe nke methyltestosterone okirikiri, ọ ga-abụrịrị na ọ na-emepụta ihe ndị na-emepụta hormones ndị na-agwọ ọrịa. N'okwu a, gbanwee usoro ọgwụgwọ na-aga n'ihu iji nọgide na-arụ ọrụ.
4. Methyltestosterone Nsonaazụ
N'ihi obere oge ndụ, methyltestosterone ga-eru n'ọnụ ya ma banye n'ọbara n'ime ihe dị ka elekere. Ọ bụrụ na onye na-azụ ọrụ na-ewe steroid n'oge na-adịghị anya tupu asọmpi, ọ ga-enweta ume, ike, na ume iji merie.
na methyltestosterone bulking oge, mgbanwe ndị ahụ na-adị nwayọ ma na-ahụghị ya. Ọ gwụla ma ị na-eme ihe nkwụsị dị egwu, ị nwere ike ọ gaghị enwe ike ikpo ọkụ ahụ ị na-arọ nrọ.
Methyltestosterone ọkara ndụ dị na 2.5 ruo 3.5 awa. N'izu dum, nke a bụ ihe gbasara 3 awa.
Mgbe akpatre ikpeazụ, methyltestosterone na metabolites ga-anọgide n'ime ahụ ruo otu izu tupu a kpochapu ya kpamkpam. N'oge nyochaa, ruo 90% nke ya ga-anọ na mmamịrị mgbe ndị ọzọ ga-egosi na feces.
Site n'ịdị elu nke nkà na ụzụ, ị ka ga-achọpụta ụzọ nke steroid ruo izu anọ ma ọ bụ isii ka ị kwụsịsị. Otú ọ dị, nke a nwere ike ịdabere na onye ọrụ ahụ were furosemide ma ọ bụ phenobarbital iji mee ka excretion nke methyl test nwalata.
6. Methyltestosterone maka ịcha
Maka ndị na-egbu oge, itinye aka na methyltestosterone na ọchịchị gị ga-eduga ná nsonaazụ ọma. Onye steroid nwere mmetụta ntakịrị anabolic. Ya mere, uru dị arọ adịghị ekwu okwu nke ọma na ọ ga-abụ onye a na-apụghị ịmata.
N'ikwu eziokwu, uru dị arọ bara uru bụ mgbe nile n'ihi nkwụsị mmiri. Na njedebe nke methyltestosterone na-egbu oge, a ga-enwe nnukwu mmiri nke excretion dị ka onye ọrụ na-edeba ụda dị arọ.
7. Methyltestosterone maka Bulking
Methyltestosterone maka uru uru kwa otu nwere ike ọ gaghị enye gị akụkụ ahụ ike zuru okè nke ị na-achọ. Nke kachasị mkpa, ihe ọ bụla ị ga-enweta bụ n'ihi njide mmiri dị elu na oke mmiri. Ozugbo ị mechara usoro ahụ, jide n'aka na ị ga-agafe usoro ọgwụgwọ iji mee ka ahụ dị ukwuu.
Iji dị mma, gbalịa ịkwado steroid. N'akụkụ ahụ ndị na-eme mkpọtụ, tinye ọgwụ ndị dị ka Dianabol, Decanoate, ma ọ bụ Trenbolone.
8. Methyltestosterone Uru
1) Nbawanye na arụmọrụ
Ndị steroid na-eme ihe site n'imebi ihe omume catabolic na ịkwalite anabolism. Omume a, n'aka nke ya, na-eme ka arụmọrụ ahụ dịkwuo mma, meziwanye ike zuru ezu, ma na-akwado psyche. Maka bodybuilders, powerlifters, na ndị na-arụ ọrụ egwuregwu, ndị a na-aba uru methyltestosterone. Onye ọrụ ahụ na - enweta ọzụzụ siri ike na ike na ume kachasị elu na - enweghị ike ọgwụgwụ.
2) Na - emewanye Omume
Ịchọrọ ịbụ onye isi ike na mpaghara gị? Ọfọn, methyltestosterone ga-eme. Onye ọ bụla so n'òtù egwuregwu ahụ ga-achọ ịmalite ime ihe ike, ike, ma lekwasị anya n'oge egwuregwu ahụ.
3) Na-emewanye Mass Mass
Ọ bụ ezie na ị nwere ike ị gaghị enweta nnukwu anụ ahụ, ị ​​ka nwere ike ịkwanye ọgwụ iji kpatụ gị methyltestosterone bulking okirikiri. Ị kwesịrị ị rịba ama na mmụba nke nha ahụ bụ mgbe niile n'ihi mmiri dị ka hormone aromatizes.
4) Ụkwara oyi na-eme ngwa ngwa
Site na methyltestosterone, ị ga-enwe mmetụta nke ọgwụ ahụ, ọ bụghị ihe karịrị otu awa mgbe ọ gasịrị. Mgbanwe ndị a na-ahụ anya na nick oge maka otu ihe. Onye steroid nwere obere ndụ. N'ihi ya, ọ ga-eru elu ya na ọnụ ọgụgụ atọ.
Ọnụnọ nke otu akụkụ methyl dị n'usoro nke methyltestosterone na-eme ka bioavailability nwekwuo uru dị n'etiti awa isii na asatọ. N'ihi na ọ bụrụhaala na ị na-agbaso usoro kachasị mma nke ọgwụ na ọbara, ị ga-enweta ike dị elu na arụmọrụ dị mma.
Ọgwụ ahụ na-adịte aka n'ime ahụ mgbe ị na-eji ya site n'ọchịchị buccal karịa mgbe ị na-elo mbadamba. Ihe a na - eme n'ihi na ọ na - abanye n'ime mkpụrụ ndụ venous ahụ site na ntinye onwe ya n'ejighị imeju.
6) Na - eme ka ọkwa nke Testosterone dị
Ọ bụrụ na mmepụta mkpụrụ nke testosterone dị ala, ọ bara uru iji ya mee ihe methyltestosterone. Ọgwụ ọjọọ bara uru nye ụmụ nwoke nwere ma nke abụọ ma nke bụ isi hypogonadism dịka nsogbu na adabaghị na gonadotropin-na-atọhapụ hormones (GnRH). Ọnọdụ ndị ọzọ gụnyere pituitary hypothalamic mmerụ, ọrịa na-adịghị mma, na enweghị nke androgens na-enweghị atụ.
N'iburu n'uche na ọ bụ ihe dị mma nke hormoni testosterone, methyltestosterone ga-eme otu ụzọ ahụ ma mee ka nwoke na nwanyị nwee mmekọahụ.
Nnwale nke methyl abụghị ezigbo ihe, ikekwe n'ihi na ọ bụ ihe dị njọ nke anabolic na-eme androgenic. Nke a bụ ụfọdụ akụkọ ọma. Mgbe ị nwere ike ịdọrọ ya na steroid ndị ọzọ dị ike, ohere bụ na ị na-amụmụ ọnụ ọchị na enyo.
Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịnọ na nkwụsịtụ, nchịkọta nke methyltestosterone na Dianabol, Nandrolone, Trenbolone, ma ọ bụ Decanoate ga-eme. N'aka nke ọzọ, steroid a ga - ejichi stanozolol nke ọma mgbe ihe niile ịchọrọ ga - eme ka ike gị dịkwuo elu.
8) Ọgwụ Ọrịa Cancer
Methyltestosterone egosila na ọ dị irè na-achịkwa ọrịa ara na-araba n'ahụ ndị ọzọ na ụmụ nwanyị. Ebe ọ bụ na ụdị ọgwụ a bụ hormone-sensitive, ọ ga-regress. Ihe ndị ọzọ na-adabere n'ụdị usoro ndị a bụ endometrium, ụfọdụ ọrịa leukemia, lymphomas, na ọrịa cancer prostate.
E wezụga nke ahụ, ọgwụ na-egbochi mgbu obi mgbu nwa. Nke kachasị njọ n'etiti ule Enanthate na ule Cypionate
9) Ijikwa Mgbaàmà Menopausal
Mmalite nke menopause na-ebute obere etrogen na ụmụ nwanyị. Mbelata na hormone a bụ ihe kpatara ịda mbà n'obi mmekọahụ, ụda libido, ọkụ ọkụ na mgbaàmà ndị yiri ya.
Nnyocha na-egosi na ịgwọ ọnọdụ postmenopausal na Methyl Test bụ irè. N'okwu ahụ, ndị inyom nwere ike ịṅụ ọgwụ na-adịghị ala n'ebughị ụzọ nweta mmetụta dị njọ.
10) Na -emezi Nkwusa na-egbu oge
N'ihe gbasara oge ntorobịa, methyltestosterone nwere ike ịbụ naanị nhọrọ kwesịrị ekwesị maka àgwà ndị ọzọ na-akpali agụụ mmekọahụ. Nzọụkwụ a na-emetụta mgbe onye ahụ a na-ahụ aja anaghị anabata nsogbu ọgwụgwọ.
Ndị dọkịta ga-edezi ọgwụ maka ọnwa isii.
11) Nwa nwoke nke na-ahụ maka Testosterone
Ọ bụ ezie na ọ bụ ihe sịntetik na 100% na-arụ ọrụ, methyltestosterone bụ ezigbo ihe nlereanya nke nwoke androgen. Usoro nke ime ihe ya yiri nke testosterone. Were, dịka ọmụmaatụ; ọgwụ ahụ ga-ejikọta mkpụrụ ndụ nke na-anabataghị ahụ na-achọpụta na hormone ahụ bụ onye mba ọzọ. N'adịghị, methyl ule ga-eme ka ọ bụrụ na ọ bụ endogenous androgen.
9. Methyltestosterone Nyocha
Ihe karịrị 90% nke methyltestosterone na-agba akaebe na steroid bụ ịrụ ọrụ nke oma. Maka bodybuilders, onye ga-ebu ụzọ hụ mmụba na iwe na ike. N'aka nke ọzọ, ndị na-arịa ọrịa hypogonadism na ọkwa dị ala nke testosterone egosiwo mmụba dị ịrịba ama.
100% nke ndị ọrụ niile ekwetawo na methyltestosterone dị mfe iji ma gụọ. Enweghị mgbatị dị mgbagwoju anya ma ọ bụ ihe mgbu na-egbu mgbu. E wezụga nke ahụ, ịṅụ ọgwụ otu ugboro kwa ụbọchị bụ nke gbakwunyere ọtụtụ ndị na-echefu ihe ha dere na-adabere n'ụkpụrụ dị iche iche.
Mgbe ha zuru oke, ọkara ọkara ndị ọrụ methyltestosterone nwere afọ ojuju. Onye ọ bụla nke họọrọ ịkwụsị ọgwụ ahụ nwere ihe abụọ dị mkpa. Dịka ọmụmaatụ, ndị mmadụ enweghị ntakịrị ihe ọmụma nke ịchịkwa mmetụta ndị ahụ tupu ha emee. Ya mere, nsogbu ndị na-adịghị mma mere ka uru methyltestosterone pụta. Abụọ, ndị ọzọ chere na steroid ndị ọzọ na-arụ ọrụ karịa methyltestosterone.
Nsogbu Ọrịa na-egbu Ahụ!
Ịdabere na methyltestosterone nyocha, ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ onye ọrụ ọ bụla nwere ahụmmadụ. Ihe nzuzo nke na-agabiga mmetụta ndị dị na ya bụ site n'iji obere doses, ịnọgide na-eji oge mkpirikpi mee ihe, na ime ndirikiri oge. Ụfọdụ n'ime mmetụta ndị metụtara gụnyere;
Mmanụ na akpụkpọ anụ
Oge mgbaghara na-adịghị mma
Ịba ụba nke ntutu isi
Njiri ụlọ elongated
Mmetụta nke testosterone
Ọnọdụ obi obi
Methyltestosterone mmetụta utịp pụọ ozugbo ị kwụsị ịnwe ya. Otú ọ dị, ịmalite ịmụ nwa na ụmụ nwanyị nwere ike iso gị gaa n'ili gị.
Otu esi ezere Methyltestosterone Side Effects
Were obere steroid nke steroid ma na-egbochi ogologo oge n'ogologo ihe dị ka izu asaa iji zere imeju imeju
Were methyltestosterone n'akụkụ ndị na-emechi 5a-reductase dị ka finasteride, dutasteride, ma ọ bụ ogidi yiri nke ahụ, nke ga-eme ka mmetụta nke dihydrotestosterone kwụsị.
Ozugbo ọgwụ ahụ gbanwee n'ime DHT, ọ na-eduga na nsogbu prostate na ntutu isi.
Jiri ndị na-emepụta aromatas dịka Tamoxifen, Nolvadex, ma ọ bụ Arimidex iji gbochie mmetụta mmetụta estrogenic
Gbanyụọ dose ahụ ozugbo ị na-enwe mmetụta ọjọọ
Jiri ntughari imeju dịka Liv-52 ma ọ bụ Liver Stabil iji chekwaa osisi ahụ site na mmebi omume
Iji belata mkpụrụ obi, mee ka ihe omume mmega ahụ na-arụ ọrụ ma na-ezere abụba zuru oke, carbohydrates, na cholesterol. E wezụga nke ahụ, ị ​​nwere ike ịgbakwunye nri gị na mmanụ na azụ na antioxidant.
Mgbe ị gwụchara, ị ga-ebu ụzọ mee ihe n'usoro PCT iji kpatụ mmepụta nke hormone testosterone.
Were otutu mmiri mgbe ị na-ezere ịṅụ ihe ọṅụṅụ na-aba n'anya
10. Methyltestosterone maka ire ere
Ebe ọ bụ na nyocha nke methyl abụghị kpamkpam n'uzo na ezighi ezi, ọ ga-abụrịrị na ị ga-adaba maka ngwaahịa aghụghọ. Ọ bụrụ na ị nwere ọgwụ iwu dị ọcha site na dọkịta, ịnweta steroid dị mfe dị ka ịzụ ahịa maka otu sneakers. I nwere ike zụta Methyltestosterone ntụ ntụ ma ọ bụ ịzụta nhọrọ dị njikere maka iji chọpụta, nzube ahụ, ma ọ bụ ọgwụgwọ.
Na oge ebe ị na-enweghị ndụmọdụ onye dọkịta, naanị nhọrọ bụ ịdaba maka ahịa ojii na labs. Ọfọn, ọ bụghị ha niile! Ị nwere ike ịzụ ahịa na gburugburu ụlọ ahịa na-echekwa Buyaas maka ogo na steroid.
Maka ụlọ ahịa na ntanetị, methyltestosterone maka ire ere bụ ọnụ ala karịa, nke a pụrụ ịdabere na ya, ị nwere ike iji ọnụ ahịa tụnyere ọnụ ahịa n'etiti ndị dị iche iche.
11. Methyltestosterone Vs Testosterone maka Bodybuilding
Methyltestosterone bụ exogenous androgen, nke fọrọ nke nta ka ọ bụrụ testosterone. Ọ bụ ezie na mbụ bụ ihe sịntetik, ha abụọ nwere usoro yiri nke ahụ ruo n'ókè nke na ahụ ahụ enweghị ike ịkọ ọdịiche ahụ. E wezụga na testosterone, e nwere ụdị ndị ọzọ dị ka Test Propionate ma ọ bụ Cypionate, na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ.
Methyltest nwere ezigbo bioavailability ọnụ ma e jiri ya tụnyere testosterone n'ihi mgbakwunye nke otu akụkụ nke methyl na usoro ya. Otú ọ dị, ma ndị steroid nwere ike ịgwọ ịka nká, hypogonadism, obi mgbu na-abanye na nkwonkwo, ọrịa ara ara, na testicles.
Ha so n'òtù anabolic-androgenic steroid
Ha na-emewanye arụmọrụ, ike, na akwara muscle na bodybuilders, ndị na-arụ ọrụ egwuregwu, na ndị na-eme ihe ike
Ha nwere ọgwụ ọgwụ na-agwọ ọrịa hypogonadism na ọkwa dị ala nke testosterone
Ahịa kwa otu Ọ dịkarịrị elu ma ọ bụrụ na ịzụta methyltestosterone na nnukwu Dịka ala
Ụzọ nlekọta Oral, buccal, na sublingual E nwere dịka gel transdermal na ngwọta
Nkwado iwu 1972 1953
Structure Enwere methyl otu na 17th ọnọdụ nke carbon atom Ọ dịghị ihe methyl dị n'usoro ya
Methyltestosterone bụ otu n'ime steroid ole na ole androgenic na-emetụta ma ọ bụ ọgwụgwọ abụọ. Ma ọ dịkarịa ala, ọgwụ dị ngwa ngwa ma bụrụ onye a pụrụ ịdabere na ya ebe ọ bụ na ụfọdụ states akwadola iji ya mee ihe na ngwa ngwa.
Ọ bụ ezie na isiokwu a adịghị emesi gị obi ike na ị ga-eji nchekwa methyl mee ihe, ọ na-enye gị aka na ihe ị ga-atụ anya mgbe ị na-ewere ya. N'iji ihe ọmụma ahụ, ị ​​nwere ike ịtụle ihe ize ndụ ndị ahụ ma mee ka ha nwee uru. Ọ bụrụ na ọ bara uru, mgbe ahụ ị dị mma zụta methyltestosterone online.
Ọgwụ ọ bụla nwere mmetụta dị n'akụkụ ya. Ya mere, naanị otu ihe nzuzo nke na-enweta nsonaazụ ya bụ site na ijikwa ọkwa ndị a. Ọ bụrụ na ị gụọ isiokwu ahụ, ị ​​ga-aghọta hacks ole na ole.
Ị na-achọ ndị ahịa? Lelee ya na ndị na-arụpụta ihe dị na methyltestosterone Buyaas.
Stan, KB, Douglas, SM, Nkà Mmụta Ahụ Ike, Ọgwụgwụ, 2011
Basaria, S., Nguyen, T., Rosenson, RS, Dobs, AS, Mmetụta nke Methyl Testosterone nchịkwa na Plasma Viscosity na Postmenopausal Women, PubMed Articles, Online, 2002
Rogerio, AL, Menopause na Agadi, Yen & Jaffe's Reproductive Endocrinology (Nkeji nke asaa), 2014
Christopher, JL, Meg, EB, Ann, SC, Mmetụta nke 17a-methyltestosterone, Methandrostenolone, na Nandrolone Decanoate na Rat Estrous Cycle, Ahụike na Àgwà, 1997
William, Llewellyn., Nri Oriri Ule, Anabolics,2009
Kickman, AT, Pharmacology nke Anabolic Steroid, British Journal of Pharmacology, PMC 2439524, Online, 2018